Oonodoli bomlingo kunye nabokwenyani be-porcelain kaMarina Bychkova | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ekuqaleni kwale nyanga sibe nethuba elihle lokudibana Izidalwa ezikhethekileyo ezimnandi zesi sibini uKasia noJacek Anyszkiewicz. un Umsebenzi wobugcisa obalaseleyo ukungena ngokupheleleyo engqondweni kaKasia, ngubani odale nganye yezi zidalwa zithandekayo.
Phantse kumda wento ezizidalwa ezincinci, nangona zilapha ebantwini kwezi iipopi ze-porcelain ezenziwe nguMarina Bychkova, Umyili kunye nomculi wezacholo ohlala eCanada. I-Bychkova iyasivuyisa ngala manani okwenyani e-porcelain anokuba nokothusa kancinci ngenxa yomsebenzi wabo obalaseleyo kunye noyilo.
UMarina usisa koonodoli bakhe kunye nezimvo zakhe ngendlela ukuthanda kwakhe ukubadala kwaqala kwiminyaka emi-6 ubudala xa engakwazi ukumelana nokudakumba, i-mediocre, oonodoli abenziwe ngobuninzi. Ke uMarina waqala ukwenza iithoyi zakhe ezilingana nezakhe ezintle.
Ngokukhula kwakhe, wangena kwiziko lobugcisa kunye noyilo u-Emily Carr, kwaye waphenjelelwa nguye, Waqala umsebenzi wakhe kuyilo loonodoli. Wabiza igama lakhe ngokwakhe ephefumlelwe ibali elifutshane likaPaul Gallico elibizwa ngokuba yi "Enchanted Doll." Intsomi ibonakalisiwe kuninzi lwemisebenzi yakhe, njengoko ehlala ephinda efumana abanye abalinganiswa abaziwayo beentsomi ezinjengeLittle Red Riding Hood okanye iCinderella.
Oonodoli ba ngobuchule yenziwe kwizinto ezisemgangathweni ophezulu ezifana ne-porcelain, isilivere, igolide kunye ne-Swarovski crystals. Oku kuvumela ukudala oonodoli ababodwa nabanobunkunkqele, obangela inkanuko kunye nokuthandeka kuyo nganye yazo. Oku kukhokelela ekubeni nabani na obajongileyo uyonwaba bubukho babo, kuba banomsebenzi olungileyo kwaye bayabamba.
Unayo imisebenzi emininzi yale yoyilo ukusukela iwebhusayithi yakho, Facebook o Instagram. Umyili okhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Oonodoli be-porcelain abathanda ubomi ngokumangalisayo beli gcisa laseRussia